अन्तरवार्ता Archives - नेपाल आज
कञ्चनले पाउन लागेका ११ लाख रुपैयाँ समाजसेवी दीक्षा चापागाईंका कारण भाँडियो
Posted on: March 27, 2017March 28, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत–१४ । बहुचर्चित ‘कञ्चन शर्मा भर्सेस मोहन रेग्मी’ प्रकरण समाजसेवी दीक्षा चापागाईंका कारण फेरि चर्चामा आएको छ । पाँच वर्ष अघि नै सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको भए पनि कञ्चनका पूर्वपति मोहन रेग्मीले ‘मानवताको नाता’ भन्दै ११ लाख रुपैयाँ दिन आइतबार घट्टेकुलोमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा सो कार्यक्रम भाँडिएको छ । कार्यक्रम […]
‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्दै प्रश्न गरिएपछि दीपकराज गिरी फायर
Posted on: March 10, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन २७ । ‘छक्का पञ्जा’ तीन दिन पनि हलमा नटिकेको भए के गर्नु हुन्थ्यो ? –फिल्मको नाम चेन्ज गरेर दुवा तिर्की राखिदिन्थे । ‘छक्का पञ्जा’को सफलता मात्र एउटा सपना भइदियो भने के गर्ने होला ? –बैंकबाट फोन आउथ्यो होला । त्यो गाडीको किस्ता चाँडै तिर, पैसा नहुनेले किन गाडी चढ्नु भन्थे होलान् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई […]
फागुन २० । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालको चौथो महाधिवेशनमा सचिव पदका उम्मेदवार डा. विष्णुप्रसाद पोख्रेलले नेपालको शिक्षा नीति परिमार्जन हुन पर्ने बताएका छन् । १ हजार २ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रजातान्त्रवादी प्राध्यपाक संघ नेपालको चौथो महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ । डा. पोख्रेलले यसपटकको महाधिवेशनमा प्राध्यापकहरुको समस्या मात्रै होइन उच्च शिक्षामा देखिएका कमजोरीहरु पनि […]
Posted on: March 1, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन १८ । राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गरिए नेपाल टुक्र्ने बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गराउने पक्षको जबर्जस्तीले मुलुक विभाजनको दिशामा गएको उल्लेख गर्दै विश्लेषक सुवेदीले भने, ‘पहाडमा कांग्रेसका नेताहरुमाथि आक्रमण हुनेछ, तराईमा एमालेका नेताहर पस्न सक्ने छैनन् । यसका धेरै संकेत देखा परिसकेका छन् ।’ सुवेदीले संविधान कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेस पनि […]
एमाले लखट्छौं भन्ने लम्पटहरु जहाँबाट आएका हुन् त्यही पुर्‍याइदिन्छौं
Posted on: February 22, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन ११ । मधेसमा त ब्यान्डबाजा बजाएर एमालेलाई लखटिदिने रे नि त ? – लखेट्छ, अंग्रेजका गुलामहरु । त्यो ब्यान्डबाजा त अंग्रेजको देशमा उत्पति भएको हो । पूर्वीय सभ्यता र दर्शनहरुमा त सहनाई बाजा छ । हाम्रो पुर्खाहरुले निर्माण गरेको सहनाई बाजा, शास्त्रीय संगीत गाउँदै त्यस्ता लम्पटहरुलाई जहाँबाट आएको छ, त्यही पुग्ने गरी मधेसबाट लखट्छौं […]
जसले चुनाव गराउन खोज्छ, बुझ्नुहोस्, मधेसमा त्यो सकिन्छ
Posted on: February 21, 2017February 22, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष सद्भावना पार्टी सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन । मधेस विना चुनाव गराउनुको के अर्थ छ ? मधेस बिनाको देश चलाउनुको के अर्थ छ ? यसो गर्न खोज्नु नै गलत छ । यदि जबर्जस्ती नै चुनाव गराउन खोजियो भने अरु क्षेत्रमा त चुनाव होला पनि मधेसमा सम्भव […]
Posted on: February 8, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
माघ २६ । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल सांस्कृतिक संघको अधिवेशनमा पार्टीले हस्तक्षेप गरेर नेतृत्व सर्वसम्मत गरेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अन्तिम संस्कार भएको छ । सांस्कृतिक संघको अधिवेशनमा सभापति देउवाको पक्षबाट तीर्थबहादुर थापा, रामचन्द्र पौडेलको गुटबाट जनार्दन आचार्यलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाइएको थियो । त्यो अधिवेशनमा एक महिला कलाकार सुष्मा कार्कीले पनि सभापति पदका लागि उम्मेदवारी […]
यस्ताे विज्ञप्ति निकाल्ने मानवअधिकारवादी भन्छन्, ‘ सिके राउतलाई पक्राउ गर्नै हुँदैन थियो’
Posted on: February 5, 2017February 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–इन्द्रप्रसाद अर्याल, अध्यक्ष नेपाल मानअधिकार संगठन नेपाल मानवअधिकार संगठनका नाममा सिके राउतलाई रिहा गर्नुपर्छ भनेर हालै जारी भएको विज्ञप्ति साँचो हो ? –साँचो हो । मैले र मेरो संगठनको तर्फबाट जारी भएको हो त्यो विज्ञप्ति । सिके राउतलाई रिहा गर्नु अपिल गर्दैै विज्ञप्ति जारी गर्न किन आवश्यक ठान्नु भयो ? –हामीले यस्तो विज्ञप्ति किन जारी […]
नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन भन्नेहरु सबै नक्कली नेपाली हुन्
Posted on: December 23, 2016December 24, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
करिब २५ वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आवद्ध रहेका पुराना नेता पर्शुराम खापुङ अहिले नयाँ शक्ति नेपालमा हुनुहुन्छ । राप्रपामा महामन्त्री, प्रवक्ता, सचिवलगायत पदमा रहेर काम गर्नुभएका खापुङ पूर्वमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । प्रमुख दलहरु संविधान संशोधन, निर्वाचन आदिमा केन्द्रीत भइरहँदा नयाँ शक्ति भने शक्ति आर्जनमै व्यस्त छ । राजनीतिको मूल प्रवाहमा आइनसकेको पार्टी र त्यो […]
बन्दकर्तालाई प्रश्नः हिजो प्रचण्डसँग मिलेर १७ हजारको ज्यान लिनुभयो, अहिले उनीविरुद्ध नै आन्दोलन ?
Posted on: November 13, 2016November 14, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
बन्दको आयोजना गरेपछि गरिब जनताको आय मर्छ । उनीहरुको क्रयशक्ति कमजोर हुन्छ । उनीहरुकालागि महंगी झन बढ्छ । तपाईहरु महंगी नियन्त्रण गर भन्दै नेपाल बन्द गर्नुहुन्छ । आन्दोलन उल्टो भएन ? – जनताले संघर्ष गर्दा यदि सत्ताका सञ्चालकहरु जिम्मेवार भएनन् भने संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । कहिले कडा रुप हुन्छ कहिले नरम । जनआन्दोलन, जनसंघर्ष, […]
‘बुवाको शरिर अहिले पनि होला, तर हामीले त्यो शरिर नहेर्ने कागजमा हस्ताक्षर गरेका छौं’
Posted on: October 7, 2016October 10, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
तीन वर्ष अघि बुवा बित्नुभयो । हामी दुई छोराले कपाल काटेनौं । किरियामा बसेनौं । बुवाको शव पनि अन्त्येष्टि गरेनौं । १३ दिनसम्म सादगी जीवनशैली अपनायौं । आफन्त, इष्टमित्र भेट्न आउँथे । हामी जुन स्थितिमा थियौं त्यो देखेर धेरैजसो छक्क पर्थे । किनभने हामी अधिकारी क्षेत्री हौं । बुबा क्षेत्रप्रताप अधिकारीको निधन भएपछि काजक्रिया गर्नु […]
‘भारतको सुरक्षा छातामा नेपाल बस्दैन’ भनेपछि मनमोहनलाई भारतले हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पारेको हो
Posted on: September 26, 2016September 27, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
एमाले नेता प्रदीप नेपाल
कालोदिवस मनाउँदैमा मधेसी मोर्चाले भारतको एजेन्डा नेपालमा लागू गराउन सक्दैन
Posted on: September 19, 2016September 20, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतमा गएर जे जस्ता विषयमा सहमति गरे ती नेपालको हित होइन भारतको हितमा छन् । नेपालको हितको कुरा होइन भारतको हित गर्ने विषय बढी समावेश भएका छन् । नेपाल जस्तो सानो, भूपरिवेष्ठित, गरिब मुलुकको स्वार्थ छाडेर प्रधानमन्त्री दाहालले शक्तिशाली भारतको स्वार्थको बढी सम्बोधन गर्नुभयो । विज्ञप्तिमा नै देखिन्छ कि नेपाली पक्षको […]
Posted on: September 13, 2016September 16, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
एघारजना दाजुभाइमा हुर्किएका थिए प्रशिद्ध लोकगायक कुमार बस्नेत । बाबुले पाँचवटी श्रीमती ल्याए । पाँच आमाका ११ छोरामध्ये कुमार दोस्रो नम्बरका थिए, अर्थात माइलो । कुमार सबैभन्दा जेठी आमापट्टिका थिए । हुने खाने परिवारमा भएका कारण उनका बुबाले धेरैपटक विवाह गरे । समय नै त्यस्तै थियो । त्यो जायज भयो । काठमाडौंको कमलपोखरीमा उनको जन्म […]
एमाले फुटाएर भए पनि संविधान संशोधनको तयारी गरिँदैछ
Posted on: September 11, 2016September 13, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
Posted on: September 1, 2016October 1, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
उनी सरदार प्रितम सिंहका नाति अंगढ सिंह । नेपालमा पहिलो पटक यातायात सेवाको सुरुवात गर्ने सिंह परिवारका अंगढले शिक्षा क्षेत्रमा हाम्फालेका छन् । अंगढका हजुरबुबाले स्थापना गरेको मोर्डन इण्डियन स्कुलले काठमाडौंमा प्रभाव छाडेकै छ । अंगढले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ केही गर्ने सोच बनाएका छन् । हजुरबुबा प्रितम र बुबाबाट प्रभावित अंगढ आफ्नो भिन्दै पहिचान बनाउन चाहन्छन् । […]
कठै प्रचण्ड ! आखिर भारतकै एक कठपुतलीमा सिमित भए
Posted on: August 28, 2016August 29, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
किशोरकुमार विश्वास बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अध्यक्ष विश्वास तराईको थारु जातिबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । तराईका आदिवासी, जनजाति, भूमिपुत्रको नाउँमा आयातितहरुले राजनीति गरिरहेको उहाँको बुझाइ छ । तराईका आदिवासी जनजातिको पार्टीका रुपमा दर्जनबढी मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दल छन् । ती राजनीतिक दलले नेपाली जनताको होइन भारतको आदेश मान्ने गरेको विश्वासको धारणा छ । […]
नायिका ऋचाले क्यामरामा मनपेट खोलिन् ‘देख्दै नदेखेको केटासँग छिट्टै बिहे गर्दैछु ’
Posted on: August 20, 2016October 1, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
ऋचा शर्मा नेपाली सिनेमा जगतमा पछिल्लो समयकी रुचाइएकी नायिका हुन् । पर्दा भित्र उनी आफूलाई परिवेशअनुसारको पात्रमा ढाल्न माहिर छिन् । जीबन्त अभिनयका लागि यिन गत बर्ष राष्ट्रिय अवार्ड पनि हात पारिन् । उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ ओस्कारका लागि मनोनितपनि भयो । ‘फस्र्ट लभ’ बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पाइला टेकेकी यी नायिकासगँ […]
भोको पेट बस्दैमा भगवान खुुसी हुँदैनन्
Posted on: August 10, 2016August 11, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
मलाई प्रेम र करुणामा विश्वास छ ।
५३ हजारपीडितलाई न्याय दिलाउन दृढ छौं: डा. माधवी भट्ट (भिडियो सहित)
Posted on: July 20, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टसँग कञ्चन न्यौपानले आयोगको काम र औचित्यका बारेमा कुराकानी गरेकी हुन् । कुराकानीका क्रममा भट्टले आयोगको केही एजेण्डामा असन्तोष पनि व्यक्त गरेकी छिन् । अब उजुरीको म्याद सकिसकेको छ, आयोगको अबको उद्देश्य के हो ? सबैभन्दा पहिले त उजुरी व्यवस्थापन त्यसपछि संकलित उजुरीको छानविन हुन्छ र अनुसन्धानका […]
डा. केसीकाे अनशन स्थल तनाव ग्रस्त, प्रहरी परिचालन
Posted on: July 10, 2016July 11, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
असार – २५ । डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको ठाउँमा केही केही व्यक्तिले नाराबाजी गरेपछि स्थिति तनाव ग्रस्त बनेको छ । डा. केसीले अनशन घोषणा गरेसँगै शिक्षण अस्पताल परिसरमा अस्पताल बचाउ समूहका नाममा केही व्यक्तिले डा. केसीबिरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका गरे लगतै स्थिति तनाव ग्रस्त बनेको हो । तनाव बढ्दै गएपछि प्रहरी परिचालन गरिएको छ । […]
रेखा थापासहित तीन्तीनवटी श्रीमती रिझाउँन नसक्नेले चौथो विहे किन गर्न खोजेको ? छबी ओझासँग विशेष अन्तरवार्ता
Posted on: July 10, 2016July 12, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
नेपाल आजले किन हुन्छ सम्बन्ध विच्छेद ? भन्ने विषयमा श्रृखंलाबद्ध हिसावले बहश चलाउंदै आएको छ । यो अंकमा हामी नायिका रेखा थापासहित ३ वटी श्रीमतीबाट टाढा भएका छबि ओझासँग बहश गर्दैछौं । रेखा थापाले उनलाई श्रीमती रिझाउँन नसकेको आरोप लगाएकी थिइन् । सोही सेरोफेरोमा रहेर कञ्चन न्यौपानेले छबि ओझालाई प्रश्न बर्साएकी छिन् । गगन थापाले […]
अनिल शाह व्याकमा बस्ने मान्छे नै होइन
Posted on: July 9, 2016July 12, 2016Posted by: नेपाल आज
म व्याकमा बसेको कहिल्यै देख्नुभाछ ? (भिडियो अन्तरवार्ता)
सरकारी अधिकारीको बकपत्रः उन्नतीको दुर्गति डेनिस दुतावासका कारण भएको हो, पुच्छरले कुकुर हल्लाउन खोजेको छ
Posted on: July 5, 2016July 21, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
डेनमार्कको सहयोगमा संचालित उन्नती प्रोजेक्टको साडे ६ अर्ब कसरी बालुवामा पानी भइरहेको छ भन्ने बारेको यो दोस्रो अध्याय हो । पहिलो अध्यायमा हामीले उन्नती प्रोजेक्ट के हो र यसले कुन जिल्लामा कति रकम केमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ भन्ने बारेमा विस्तृतरुपमा उल्लेख गरेका थियौं । यो अध्यायमा हामीले सो प्रोजेक्टको सडक सञ्चालन गर्ने कामको […]
ज्योती मगरका रोचक रोचक अनुभव, रोल्पादेखि विदेशसम्मको यात्रामा यस्तोसम्म भएछ
Posted on: July 4, 2016January 21, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
ज्योती मगरलाई आलोचना गर्ने धेरै छन् । आलोचना गर्नेहरुले नै ज्योती मगरको भिडियो हेरेर युट्युवमा दर्शक बढाउंने गर्दछन् । रोल्पादेखि काठमाडौंसम्मको जीबनयात्रामा उनले थुप्रै आरोहअवरोह पार गरेकी छिन् । भद्दा नृत्य गरेर चर्चामा आएको तथा अश्लिलताको आधारमा टिकेको आरोप खेपेकी उनले आफ्ना बारेमा कञ्चन न्यौपाने र मिलन गुरागांईसंग खुलेर कुरा गरेकी छिन् । मगरको भिडियो […]
एपेन्डिक्स फुटेपछि आन्द्राभुँडी पखालेर बाँचेका पत्रकारकाे मार्मिक कथा
मेरो अनुभव विवाहपछि दसौका लागि पहिलो ससुराली यात्रा थियो । अघिल्लो दसैंमा कार्य व्यस्तताले जान पाएको थिइना । यसपालि त साथमा छुनुमुनु गर्ने ८ महिनाको छोरो पनि भइसकेकाले उनका लागि यात्रा रोमाञ्चक थियो । पहिलोपटक दसैंमा ज्वाइको आगमनले सबै खुसी थिए । तर, त्यो खुसी धेरैबेर रहन पाएन, एकाएक रुवाबासी चल्न थाल्यो । एपेन्डिक्स […]
होटलमा वाइन सर्भदेखि नर्भिकको प्रशासन प्रमुखसम्म
Posted on: July 3, 2016July 5, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
अनिलको इसिजीजस्तै जिन्दगी
Posted on: July 1, 2016July 3, 2016Posted by: नेपाल आज
उपेन्द्रले दिएको १–१ अर्बबाट फैलिएको भाइ विरेन्द्र र सुरेन्द्रको व्यवसाय
Posted on: June 29, 2016July 3, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने मागसहित आमरण अनसनमा बस्ने तयारी गरेपछि गोविन्द केसी फेरि तातो बहशमा छन् । अख्तियारले उनको मानसिक सन्तुलन विग्रेको टिप्पणी गरेको छ । केसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरकफरक छ । कसैका लागि उनी सन्कीमात्र हुन् भने कसैका लागि उनी निष्कलंक सदाचारी चिकित्सक र चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता । […]
चिकित्सा शिक्षा ऐन अर्थमन्त्रालका कारण रोकियो, भगवान कोइरालाको असन्तुष्टी सार्वजनिक रुपमा पोखियो
Posted on: June 25, 2016July 11, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
असार – ११ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदमा पेश नभएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमती नदिदा आयोगले बुझाएको मसौदा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न नपाएको कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अायाेगले ३० बैशाख, २०७३मा प्रधानमन्त्रीलाई मसौदा बुझाएको थियो । […]